निजी विद्यालय र आन्दोलित शिक्षकहरु | चितवन पोष्ट दैनिक
निजी विद्यालय र आन्दोलित शिक्षकहरु
केही समयअघि तलब वृद्धिलगायत अन्य सुविधाको माग गर्दै नेपाल इष्टुले चितवनका धेरै निजी विद्यालयहरु बन्द ग¥यो । बन्दको भोलिपल्ट चितवनका केही पत्रिकाले उक्त बन्दलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समाचार सामग्री बनाएर ठूला–ठूला अक्षरमा हेडलाइनहरु छापे– ‘गुरू नै बेइमान भएपछि….’, ‘शिक्षकको दादागिरीले विद्यार्थीहरु पढ्नबाट वञ्चित’ आदि आदि । जिल्लाको कुनै एक अनाम गल्लीमा दुईवटा साँढे, कुकुर, बिरालोको झगडाको निहुँमा सम्पूर्ण चितवन बन्द भई विद्यार्थीको पढ्न पाउनु पर्ने अधिकार हनन् हुँदा बोल्न गाह्रो मान्नेहरु जायज मागको सुनुवाइ होस् भनी आन्दोलन गर्दा यी मिडियाहरु धारेहात देखाउँदै नजाने को–कोबाट सिकेका हुन्, थरीथरीका शब्दरुपी वाणहरु प्रहार गर्दै ह्वारह्वार्ती बाहिर आउँछन् । लाग्छ, समाजका सबैभन्दा निरीह प्राणी भनेका निजी विद्यालयका शिक्षकशिक्षिका तथा कर्मचारीहरु नै हुन् । यिनीहरुसँग बोल्ने अधिकार छैन, आफ्नो माग राख्न पाउने अधिकार छैन, यिनीहरुलाई लोकतन्त्र आएकै छैन । सर्वोच्च अदालतदेखि सबैले यिनलाई नै गाली गर्छन्, हेप्छन् र दबाउँछन् ।
लाग्छ र सुन्दैछु, यस्ता बन्द फेरि पनि हुँदैछ । हरेक वर्ष हुने यस्ता बन्दले समस्याको समाधान गर्दैन, बरू समस्या बढाउँछ । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्न जरूरी छ । सरकारले बजेट भाषणमार्फत हरेक वर्ष सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमा वृद्धि गर्छ, महँगी भत्ता दिन्छ जसको जाँतोमा निजी विद्यालयका शिक्षकशिक्षिका तथा कर्मचारीहरु पिल्सिन्छन् । सर्वोच्च अदालत तथा शिक्षा कार्यालय शैक्षिक सत्रको बीचमा आएर शुल्क वृद्धि गर्न आदेश दिँदैन र विद्यालय संस्थापकहरु आफूले पाइरहेको नाफाको केही प्रतिशत बाँड्न तयार हुँदैनन् र सुरू हुन्छ आन्दोलन र बन्दको खेल, जसको शिकार बन्छन् विद्यार्थीहरु । उनीहरु निर्दोष भएर पनि दोषीझैँ सजाय भोग्न पुग्छन् ।
हो, कुरा यहाँनेर आएर पेचिलो बन्छ । सर्वोच्च अदालत र जिशिकाको निर्णय र आदेशलाई मान्ने कि नमान्ने ? सायद नमान्ने । र त आन्दोलन भैरहेको छ र यो आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन जरूरी छ । झारेपारे टाइपको होइन; फुटेर हैन, जुटेर आन्दोलन गर्न जरूरी छ । जुट्नुको मतलब एकै ठाउँमा विलय हुनु हैन, आ–आफ्नो अस्तित्व कायम राख्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यगत एकताको सूत्रमा बाँधिनु आवश्यक छ । जसरी ०४६ सालको आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरु एक भएर आन्दोलनमा होमिएका थिए, त्यस्तै ०६२÷०६३ सालको आन्दोलनमा पनि । नेपाल इष्टु र इष्टु नेपालले त्यतातिर सोचे राम्रै होला ।
अँ, लेख्दै थिएँ– सर्वोच्च अदालत र जिशिकाको निर्देशनको कुरा । यदि स्व. राजा वीरेन्द्र र उनका आसेपासेका कुरा खुरूखुरू मानेको भए तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको र उनका आसेपासेको कुरा हुन् भन्दै बसेको भए ती जनआन्दोलन सफल हुन्थे ? यसर्थ पनि आन्दोलन जरूरी छ । सबैलाई राष्ट्रसेवक देख्ने सर्वोच्च अदालत र जिशिकाका आँखाले निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई किन राष्ट्रसेवक देखेनन् ? किन उनीहरुको पक्षमा बोलेनन् ? के हामी यसै देशका नागरिक हैनौँ ? के हामी राष्ट्रसेवक हैनौँ ? के हामीले राष्ट्रलाई केही दिएका छैनौँ ? अरुलाई छुने महँगीले हामीलाई नि छुन्छ । हाम्रो पनि पेट छ । बालबच्चा छन् । तिनका पनि पेट छन् । आङ छ । दिमाग छ । शरीर छ । भोक लाग्छ । बिरामी हुन्छन् । पढ्छु भन्छन् । के यो कुरा सर्वोच्च अदालत र शिक्षा कार्यालयलाई थाहा छैन ?
जब हरेक कुराको मूल्य वृद्धि र तलब वृद्धि शैक्षिक सत्रको सुरूमा हुँदैन भने शिक्षक, कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनचाहिँ किन वैशाख नै चाहियो ? कि त सर्वोच्च अदालतले घोषणा गर्नुप¥यो, तिमीहरु राष्ट्रका तल्लो दर्जाका नागरिक हौ । तिमीहरुका लागि लोकतन्त्र आको छैन । लोकतन्त्र प्राप्तिमा तिमीहरुको कुनै भूमिका थिएन । तिमीहरुको काम भनेको सुरूसुरू विद्यालय जानु, खुरूखुरू पढाउनु, लुरूलुरू घर फर्कनु, दाल–चामल भए खानु नत्र लुपुक्क निदाउनु हो । तिमीहरु उफ्रेर हुनेवाला केही छैन । शैक्षिक विकासमा तिमीहरुको केही भूमिका छैन । तिमीहरु त विद्यालय सञ्चालकहरुको नोकरी गर्ने नोकर हौ । जाऊ, उनैको चरण–कमलमा स्पर्श गर्न, भन्न सक्नुप¥यो । कि त जिशिकामार्फत निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीहरुलई विशेष सहुलियत कार्ड वितरण गर्नुप¥यो जसबाट उसले शिक्षा, स्वास्थ्य, बजारका उपभोग्य वस्तु र सबै क्षेत्रमा उसले एक वर्षअघिको मूल्यमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकोस् ।
विद्यालय सञ्चालकहरुबाट यो समस्याको समाधान आउनेवाला छैन, किनभने उनीहरु आफ्नो नाफा कटौती गर्ने पक्षमा छैनन् । शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा लगानी गरेर पनि अलिकता पनि सेवाभाव नभएका र पूर्ण रुपले व्यापारिक सोच भएका अनि शिक्षालाई व्यापार बनाएर खान पल्केकाहरुको जमात धेरै छन् यहाँ । शिक्षक, कर्मचारीको तलब बढाउन मासिक शुल्क बढाउनै पर्दैन, जब शिक्षालाई व्यापार नै बनाएपछि, दुई–चार महिना घाटा सहनु पनि त सक्नुप¥यो नि । आखिर वैशाखमा त चक्रिय ब्याजका रुपमा नाफा आइहाल्छ । घाटा नै नहुने यो कस्तो व्यापार हो ?
फेरि निजी विद्यालय पनि थोरै छन् र ? सक्नेले नि खोलेको छ, नसक्नेले नि । बुझेकाले नि खोलेका छन्, नबुझेकाले नि । आवश्यक ठाउँमा नि छ, अनावश्यक ठाउँमा नि । शिक्षा कार्यालयले के अनुगमन गर्छ ? कोठे अनुगमन ? केको आधारमा अनुमति दिन्छ ? यदि मासिक शुल्क वृद्धि नगरी तलब वृद्धि गर्ने स्थिति छैन भने व्यापार बन्द गरे हुन्न ? शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्छु÷गर्छौं भनेर ल्याप्चे लाइसकेपछि कम्तीमा नेपाल सरकारको तलबमान त दिन सक्नुप¥यो नि, कि परेन ? अर्थको अभावमा, मजदुर आन्दोलनको कारणले देशका विभिन्न उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा, दुई–चारवटा निजी विद्यालय बन्द हुँदा खासै ठूलो असर नपर्ला । समस्या हो, विद्यार्थी र कार्यरत शिक्षकको व्यवस्थापन । यसका लागि सरकारले त्यस्ता ठाउँमा आवश्यकता हेरी नयाँ विद्यालय खोल्नुप¥यो जहाँ ती विद्यार्थी र शिक्षकले ठाउँ पाऊन् र जसमा विद्यार्थीहरुले निःशुल्क अंग्रेजी माध्यममा शिक्षा पाउँछन् । के सरकार यो गर्न तयार छ ?
र अन्त्यमा, नेपाल इष्टु वा इष्टु नेपालले बन्दका कार्यक्रमहरु किस्ताबन्दीमा नल्याई, वार्ताका लागि वार्तामा नबसी सम्बन्धित सबै पक्षको सहमतिमा कसरी देखिएको समस्याको दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सकिन्छ ? त्यतातिर पाइला चाल्न आवश्यक देखिन्छ । शुल्क निर्धारण समिति, विद्यालय अनुगमन समितिले पनि यही बन्द र आन्दोलनको बेलामा चर्चा बटुल्छ । वर्षभरि केही नगरेको आभास हुन्छ । प्याब्सन सकारात्मक जस्तो देखिए पनि प्याब्सन नै बाधा बन्दै आएको अनुभव छ, तमाम शिक्षक साथीहरुको । अभिभावक संघ सकारात्मक देखिन्छ, तर उसले भनेको वैज्ञानिक शुल्क वृद्धि कस्तो हो ? स्प्ष्टसँग आउनुप¥यो, ताकि हरेक वर्ष सरकारले तलब बढाउनासाथ निजी विद्यालयका शिक्षकहरु आन्दोलन र बन्दको तयारीमा बस्न नपरोस् ।